Madaxweynaha Hirshabeelle oo maanta furaya Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Munaasabad lagu furayo Kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo ay ka qeyb-galayaan masuuliyiinta gobolka ayaa maanta ka socota xarunta Baarlamaanka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Baarlamaanka oo mudo ka badan 2 bilood ku maqnaa fasax ayaa hada intooda badan waxay ku sugan yihiin magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku xigeenkiisa ayaa ka qeyb galaya Munaasabadda furitaanka Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Hirshabeelle. Kalfadhiga 5aad ee Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhowr jeer dib u dhacay waxaana ka dhashay doodo badan oo ay qabaan Xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Hirshabeelle inuu diidadanaa furitaanka Kalfadhiga maadaama 3 jeer uu ka baaqday waqtigii loo balamay, sida ay Kalfadhi u sheegayn Xubno katirsan Baarlamaanka Maamulkaasi. Kalfadhiga 5aad ee Golaha Wakiilada Hirshabeelle ayaa maanta furmaya iyadoo ay gobolka ka jiraan dhibaatooyin daran oo heesta dad u badan reer mii, kadib markii ay dilal iyo dhaawacyo kala kulmeen maleeshiyo hubeysan.
Xildhibaan Cali Saciid: Hirshabeelle dhiigga carruurta ayaa qubanaya, waana musiibo Qaran